Sida naqshadeeye dusha Premier ahama ee Shiinaha, Hermes Foshan (Hengmei) Steel Co., Ltd la aasaasay sanadkii 2006, taas oo u dadaalay abuurnimo ahama oo tayo leh ka badan 10 sano. Ilaa hadda, waxaan ayaa soo saartay galay shirkad weyn oo isku dhafan ee design wax ahama ee, processing.
Haddaba Hermes (Hengmei) Steel leeyahay sumcad wanaagsan in badan oo dalalka.
India: Waxaan bilaabay sahayda suuqa Hindiya tan sano 2010. Hadda waxaan leeyahay sumcad wanaagsan ee Mumbai, Chennai iyo Delhi, macaamiil fara badan door bidaan tayada Hermes.
Bariga Dhexe: Iyadoo dadaalka aan ugu jirno kooxda sale xirfadeed, hadda waxaan aruurinaynaa macaamiisha iyo aad u badan. macaamiisha oo dhan ayaa horey u noqday saaxiib ka mid ah Hermes Steel.
Supply in badan oo mashaariicda iyo warshadaha alaabta guriga, mashruuca ee Airport, Metro Dhismaha Architecture, ahama stockholder steel ee South Korea, Thailand, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Filibiin.
MAXAANU HADDA MA?
In si ay u daboolaan macaamiil fara badan baahida iyo codsiga, hadda annaga qudhayadu sooco, beerta kasta oo ahama waxaa loo isticmaalaa, mahrajaan ahama, waxyaabaha ahama & been abuurtay, oo ay ku jiraan xijaab, trims, qaybo ka mid wiishka, gaariga, iwm
- Iyada oo in ka badan 10 sano waayo-aragnimo ee beeraha kuwaas, waxaan heysanaa koox dhoofinta xirfadeed & firfircoon.
- Our mugga billaha ah ee iibka gaadho in ka badan 10000 oo ton, iyo waxyaabaha aannu si weyn uga caan ah gudaha iyo dibaddaba, sida Bariga Dhexe, Southeast Asia iyo Afrika, iwm
- Iyada oo qalab horumarsan iyo technology cusub, waxaan si fiican u yaqaan ganacsiga model ah sababtoo ah heerka tayo wanaagsan leh.
- nidaamka tayada buuxiya,-iib aheyn ka dib taageero & adeega.
- baaritaan Customized waxaa had iyo jeer soo dhaweeyay! TUSAALOOYINKA FREE loo diri kartaa codsigaaga!
The injineero weyn iyo samaynta adduunka oo dhan dooran Hermes Steel sida lamaane ku haboon mashaariicda ay! Nala soo xiriir, mustaqbal ifaya iska leh noo!